PixelHELPER फाउन्डेशनको बारेमा जानकारी
पिक्सेल सहयोगी संसारभरको जस्तो देखिन्छ कार्यकर्ता र कलाकार नेटवर्क लागि मानव अधिकार विरुद्ध दमन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि लडाईँ गर्नु। संग कला हामी महत्त्वपूर्ण हुन चाहन्छौं सामाजिक समस्याहरू औंल्याउनु हामी पनि ई संचालनविकास सहायता परियोजनाहरु अफ्रिकामा। आफ्नै क्यान्ड रोटी बेकरीहरू को लागी खाद्य स्थिरता बढाउन उत्पादन शरणार्थी शिविर, द्वन्द्व क्षेत्रहरू & प्राकृतिक प्रकोप डिब्बामा टिकाऊ रोटी हामी बढ्दै छौं खानाको स्थिरता अफ्रिकामा। क्षेत्रमा आपतकालीन सहायता प्रयास गर्दछ पिक्सेल सहयोगी नजिकै अफ्रिका मा क्यान्ड रोटी कारखानाहरूको छेउमा UNHCR त्यहाँ शरणार्थी शिविरहरू छन्, साना मोबाइल कन्टेनर अस्पतालहरू खोल्नु। कृपया हामीलाई मेनू आईटम अन्तर्गत मद्दत गर्नुहोस् दान र तिनीहरूलाई समर्थन गर्नुहोस् काम हाम्रो संगठन। निम्न भिडियोले तपाईंलाई हाम्रो महत्त्वपूर्ण काममा छोटो अन्तरदृष्टि प्रदान गर्दछ।
रंगीन सन्देशहरूले हाम्रो जीवनलाई प्रभाव पार्छ। PixelHELPER ml को बारेमा छवि फिल्म
मानवता विरुद्धका अपराधहरूसँग तपाईं कसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ
लाभ, जीवन नरक? कसरी तपाई परिवहन गर्नुहुन्छ
सरकारी जिल्लाबाट मोरक्कोसम्मको होलोकास्ट स्मारक? र: तपाईं कसरी युरोपियन पर्खालहरू तल ल्याउने?
यस बाहेक हामी संचालन गर्छौं विदेशमा विकास सहायता र कार्य कला परियोजनाहरू.
भिडियो जारी भएको लगत्तै मोरक्को सेना आइपुगे
बीबीसी अरबी र लाखौं मुस्लिमहरूले युगुर नरसंहार स्मारकको विनाश देखे
यसले प्रजातन्त्र, सहिष्णुता र समानताको लागि हाम्रो कार्य देखाउँदछ जब तानाशाही राज्यहरु र आतंकवादीहरू मानव अधिकार र कलात्मक स्वतन्त्रतालाई कुल्चनुहोस्।
क्यान्ड रोटी बेकरीहरू बढाउन उत्पादन खाद्य स्थिरता लागि बेघर व्यक्ति, शरणार्थी शिविर, द्वन्द्व क्षेत्रहरू र प्राकृतिक प्रकोपहरू डिब्बामा टिकाऊ रोटी हामी बढ्दै छौं अफ्रिकामा खाद्य स्थिरता & मा Menschen ती मा प्रत्यक्ष सडक.
आउनुहोस् र आफैलाई प्रमाणित गर्नुहोस्
कृपया हामीलाई मुनि सहायता गर्नुहोस् मेनू आईटम दान गर्नुहोस् र हाम्रो संगठन को काम समर्थन गर्दछ।
टागेस्चाउले थाईल्याण्डको राजाको बिरूद्ध हाम्रो गीतमा रिपोर्ट गर्दछ।
PixelHELPER को बारेमा नोभेम्बर 15th, 2021Oliver Bienkowski